Madaxweynaha dalka Eleteeriya oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMadaxweynaha dalka Eleteeriya oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho
29/10/2018 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Dibada, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Wafdi heersare ah oo uu hogaaminayo madaxweynaha dalka Eritrea Asaias Afwerki ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu xiray calanka Soomaaliya iyadoo masuul ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo diiday magaciisa in la xigto ayaa Halbeeg u sheegay in dhowaan calamada dalka Eritrea lagu xiri doona jidadka Magaalada si loogu soo dhoweeyo Wafdigan ka socda Eritrea.
Booqashada wafdiga kusoo wajahan Muqdisho ayaa imaanaya kadib markii bishii Agoosto ay magaalada Muqdisho soo gaareen wafdi horudhac ah oo uu hogaaminayay wasiirka Arrimaha dibadda Eritrea Saalax Cusmaan.
Waa markii ugu horeysay ee wafdi heer madaxweyne ah oo ka socda dalka Eritrea ay soo gaaraan magaalada Muqdisho iyadoo uu soo hagaagayo xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Madaxda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa kala saxiixday heshiis wada shaqeyn horaantii bishii 9-aad ee sanadkan aynu ku jirno.